Voalohany aty Afrika: tongan’ny Telma sy Ericsson eto ny 5G | NewsMada
Voalohany aty Afrika: tongan’ny Telma sy Ericsson eto ny 5G
Hiaka farany amin’ny teknolojia niomerika! Azon’ny mpanjifa ampiasaina, nanomboka ny 26 jona teo, ny tambajotra manana tanjaka 5G, omen’ny Telma, miara-miombon’antoka amin’ny orinasa Ericsson. Maro ny azo ampiasana azy, mitondra haitao vaovao amin’ny lafiny fifandraisan-davitra, eo amin’ny sehatry ny fanabeazana, ny fahasalamana ary ireo tolotra ara-barotra isan-karazany sy isan-tsehatra samihafa.
Matanjaka sady avo lenta amin’ny lafiny fifandraisan-davitra ny 5G. Eto Antananarivo no nisantarana azy ary haparitaka tsikelikely any amin’ny faritra sy ireo tanàna ahitana ny Telma rehetra.
Voalohany aty Afrika ny ampiasana ny 5G eto Madagasikara. Fitaovana “clé” miisa roa no ampiasaina, avo lenta, azo ampiasaina amin’ny finday (eMBB) sy ny tsy ampiasana taribim-pifandraisana tsy mihetsika (FWA). Haingam-pandeha sady matanjaka, manafaingana ny asa atao sy ny fifandraisana ny lalao isan-karazany ary indrindra ilaina amin’ny asa. Dingana vaovao omen’ny vondrona orinasa Axian, orinasa renin’ny Telma hanatsarana ny tontolo niomerika sy hampandrosoana ny tontolon’ny fandraharahana eto Madagasikara.
Fiovana lehibe amin’ny niomerika
Nilaza ny administratera tale jeneralin’ny Telma, i Patrick Pisal-Hamida, fa “hanova ny fomba fampiasantsika ny teknolojia vaovao sy niomerika ny 5G ary hiantraika goavana amin’ny toekarena eto amintsika. Ankoatra ny tanjany sy ny hafainganam-pandehany, tena kely ny fe-potoana fiandrasana ny fifandraisan-davitra sady azo antoka, azo ampiasana fitaovana informatika maro. Ho reharehantsika aty amin’ny ranomasimbe Indianina sy Afrika izany fivoarana lehibe izany”.
Ho an’ny filoha tale jeneralin’ny vondrona Axian, i Hassanein Hirdjee, “nohafainganina ny fampiasana ny 5G mba ho tena hitondra fiovana eo amin’ny sehatry ny niomerika eto Madagasikara sady hanaovana fanamby goavana amin’ny fiatrehana ny krizy nateraky ny Covid-19. Hita mibaribary, ankehitriny, ny andraikitry ny fifandraisan-davitra manoloana ny krizy, manaporofo ny maha fototry ny sehatra rehetra ny lafiny niomerika”.
Amin’izao fotoana izao, manana finday ny 40%-n’ny Malagasy ary manodidina ny 2 tapitrisa ny mampiasa facebook.
Lutte contre le coronavirus: les médecins militaires prêtent main forte 14/07/2020
Effet Barea 14/07/2020
Asief-Covid 19 : miandry ny valin’ny fitiliana farany i Jhone Love 14/07/2020
“Online Chess Open” : hilalao sady hitantara ny “tournoi”, Rakotomaharo Fy 14/07/2020
Kianja manara-penitra : takin’ny Malagasy rugby mba hatao bozaka “hybride” 14/07/2020